'Kusezandleni zikaZuma ukuthi ahambe ngesizotha noma aphume esehlehla nyova' | News24
'Kusezandleni zikaZuma ukuthi ahambe ngesizotha noma aphume esehlehla nyova'
Mahlatse Mahlase noLizeka Tandwa
Johannesburg - Konke sekusezandleni zikaMengameli Jacob Zuma ukuba anqume ukuthi uhamba "sekukubi" angatholi ngisho imihlomulo etholwa ngomengameli, noma ahambe "ngesizotha" ngokuthi azehlele yena esikhundleni.
Lo ngumbono wamalungu alinganiselwa kwamane eNational Executive Committee (NEC) ye-ANC ngaphambi komhlangano obalulekile ozobanjelwa e-East London ngoLwesithathu.
Kepha osopolitiki abakhulume neNews24, abazange bavume ukuthi umhlangano wangoLwesithathu kumele kube yindawo yokuketula uZuma uma enqaba ukwehla esikhundleni.
Lokhu kuza ngemuva kwemibiko ethi amanye amalungu e-NEC afaka umoya ubuholi obusha ukuba buketule uZuma ukuze "bahlanze" inhlangano ngaphambi kokhetho lukazwelonke olubalulekile luka-2019.
OLUNYE UDABA: UZuma uyinkinga kwi-ANC, kumadlela ndawonye nasezweni - Nzimande
UZuma akakaze atshengise izinkomba zokuthi uzoshenxa esikhundleni, njengoba iHhovisi likaMengameli likhiphe isitatimende laveza ukuthi uzohlangana nomlingani wakhe waseKenya, u-Uhuru Kenyatta, eThekwini ngoLwesine - ngemuva kosuku okuhlelwe ngalo lo mhlangano.
Amalungu e-NEC, akhulume neNews24 abe esecela ukungadalulwa amagama, avumile wonke ukuthi uZuma "uwumthwalo", kepha afisa ukuthi inhlangano ikwazi ukugwema ukubhekana ngeziqu zamehlo mayelana nekusasa lakhe.
Osondelene kakhulu noRamaphosa utshele iNews24 ukuthi indlela elula ukuthi uRamaphosa ahlangane noZuma badingide ngalolu daba.
Uthe bekulindeleke ukuthi babe nomhlangano ubuso nobuso ngempelasonto KwaZulu-Natal. Akucaci-ke noma lo mhlangano wenzekile noma cha.
"URamaphosa bekumele atshele uZuma ukuthi 'ivoti liyamudla'. Kumele akhethe ukuthi uphuma esikhundleni ngesizotha noma uhamba esehlehla nyova," kusho umthombo.